Hariiroon dhippachuu fi dullumni qaban maali? - BBC News Afaan Oromoo
Hariiroon dhippachuu fi dullumni qaban maali?
Mudannoowwan kan akka du'a ijoollee ofii, diigamuu gaa'elaa yookin hojiirraa ari'atamuutiin sammuun yoo dhiphate, yoo xiqqaate waggoota afuriin dafee kan dulloomu ta'u qorannoon biyya Ameerikaa tokko mul'ise.
Qorattoonni fayyaa sammuu qorachuuf jecha dandeettii yaadachuu fi xiinxaluu namoota 1,300 sakatta'aniiru.
Namoonni qorannichi irratti adeemsifames kan umuriin isaanii waggaa shantamaa hanga jahaatamaa ta'aniidha.
Qorannichi koonfaransii idil addunyaa Waldaa Dhukkuba Alzaayimar irratti Yunaatid Kingidamitti kan dhiyaatee yoo ta'u, dhiibbaa dhukkubni sammuu bu'aa qorannichaa irratti qabaachuu danda'u ilaalcha keessa kan galche akka hin turrees ibsameera.
Dhiphachuun dhukkuba sammuuf kan nama saaxilu ta'uusaa qorannichi agarsiisuu baatulleen, hojii sammuu guyya guyyaa irratti garuu dhiibbaa akka fidu barameera.
Dhiibbaan sammuu irra gahu kun ammoo yeroodhaan booda dhukkuba sammuu fiduu akka danda'u illeen ibsameera.
Dandeettiin hubachuu gadi bu'uu
Yaadni ijoon qorannoo kanaa dhiphannaan madaa'u sammuutiif saaxilamu kan jedhuudha.
Madaa'uun sammuu ammoo saaxilamummaa dhukkuba sammuu ni cimsa. Kunis qorattoota Yunivarsiitii Saawuz-Haampitaniin qoratamaa jira.
Qorannoon Yunivarsiitii Wiskonsinitti mummee barnootaa fayyaatiin qoratame, warreen Afriikaa-Ameerikaanootaa namoota sanyii biraa caalaa dhiphachuuf kan saaxilaman ta'uusaanii agarsiise.
Sababnisaas namoonni kunneen garee namootaa qorannicharratti hirmaatan kaan waliin wal birratti yoo ilaalaman, kan sadarkaa jireenyaa gadi-aanaa jiraatanidha.
Mudannoowwan dhiphina sammuu ni fidu jedhamanii gareewwan hundaan himamanis, ulfaatina barnootaa, hanqina maallaqaa, rakkoolee fayyaa ciccimoo fi rakkoo xin-sammuuti.
Akkasumas, umurii ijoollummaa fi dargaggummaatti dhiphachuu fi iddoon jireenyaa garii hin taanee jiraachuun saaxilamummaa dhukkuba sammuu keessatti qooda akka qabaatan qorannichi mul'iseera.
Iddoowwan hiyyummaan itti babal'ate keessa jiraachuun saaxilamummaa dhukkuba sammuu guddisuu danda'a.
Yunaayitid Kingdamitti Daayreektara Dhimma Qorannoo Alzaayimar kan ta'an Dooktar Kaarool Ruutleej, walitti dhufeenyi dhiphinaa fi gadi bu'uu waa yaadachuuf sababoonni garaa garaa jiraachuu akka danda'an illeen himaniiru.
Haa ta'u malee "sammuun kutaa qaamaa qorachuuf baayyee walxaxaadha" jedhan.
Wantoota saaxilamummaa dhukkuba sammuu hir'isan
Torbeetti guyyoota shaniif yoo xiqqaate daqiiqaa soddoomaaf qaamni akka sosocha'u gochuu.
Tamboo xuuxu dhaabuu.
Qurxummii, muduraalee fi kuduraalee dabalatee, soorata fayya-qabeessaa fi madaalawaa ta'e soorachuu. Foon diimaa fi sukkaara hir'isuu,
Ammeentaa dhugaatii alkoolii hir'isuu, yoo baayyate torbeetti liitira 0.14 dhuguu (dubartootaa fi dhiiraaf walqixa).
Dhimmoota fayyaa biroo kan akka dhiibbaa dhiigaa ol'aanaa, cooma qaama keessaa fi dhibee sukkaaraa to'achuu.
Saaxilamummaa dhibeewwan akka sukkaaraa, sammuu keessatti dhangala'uu dhiigaa fi dhukkuba onnee hir'isuuf ulfaatina qaamaa fayya-qabeessa qabaachuu.
Guyyaa guyyaan gaafiiwwan yookin taphoota xiinxala sammuu barbaadan hojjechuu/taphachuu fi wantoota haaraa barachuu.
Walitti dhufeenya hawwaasummaa cimsuu.